Weerar ka dhacay Sh/Hoose | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Weerar ka dhacay Sh/Hoose
Weerar ka dhacay Sh/Hoose
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay dhaceen Qaraxyo jidgal ah oo lala beegsaday Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, sida ay inoo sheegeen qaar ka tirsan dadka degaanka.
Qaraxyadan oo laba ahaa ayaa waxaa kolonyo ka tirsan Ciidanka AMISOM lagula eegtay agagaarka degaanka Numbar-60 ee Gobalka Shabeelada hoose, halka kan kalena uu ka dhacay degaanka Shalambood.
Idaacadda Andalus oo ku hadasha Afka Shabaabka ayaa baahisay in Qaraxa ka dhacay agagaarka degaanka Shalambood lagu burburiyay Gaari Taw ah, sidoo kalena khasaare dhimasho iyo dhaawac ah lagu gaarsiiyay Ciidamadii la socday gaarigaasi.
Warar madax banaan ayaa sheegaya kolonyadan Qaraxyada lala beegsaday in ay ka soo baxeen magaalada Muqdisho, iyaga oo ku sii jeeday degaan ka tirsan Shabeellaha Hoose, si ay u soo bedelaan guuto halkaasi ku sugan.
Ilaa hadda saraakiisha Ciidamada AMISOM wax faah faahin ah kama aysan bixin Qaraxyadan Ciidamadooda lagula eegtay Gobolka Shabeellaha Hoose iyo sheegashada khasaaraha ee Shabaabka.